Safarka Skyward waa ciyaar aad u zen leh muusig qaas ah | Androidsis
Kooxaha shimbiraha ee ciyaar aad u adag: Safarka Skyward ee OST ee Jeff Van Dyck
Hadda waan tagnaa si buuxda nasashada ay keentay Safarka Skyward, Ciyaar caadi ah oo aan ku ogaanayno sida loo hogaamiyo adhi dhan oo shimbiro ah kuwaas oo awood u yeelan doona inay kiciyaan nafta qabow ee bini-aadamka keligood jasiiradaha ku jira.
Ciyaar leh taabasho falsafadeed oo aad u saraysa oo asalkeedu inagu hogaaminayo duruufaha qaarkood ee nolosha aadka ugu xidhan dad badan. Safarka Skyward waa ciyaar uu abuuray Dan Vogt, oo loo aqoonsan yahay shaqadiisa Data Wing, ciyaar tayo sare leh oo arcade ah.
1 Soo jiid dabaysha qaadi doonta adhiga shimbiraha
2 Ciyaar zen si aad u nasato
3 Safarka Skyward iyo Jeff van Dyck
Soo jiid dabaysha qaadi doonta adhiga shimbiraha
Safarka Skyward waa inaad ku dhaqaaqdaa farta u qaad si aad u sawirto dhabbaha kaas oo adhiga shimbiraha ah duulaan. Intaas shimbirood oo aad u tiro badan, oo noqon kara xadaaraduhu, way kugu soo laaban doonaan adiga si aad mar kale u soo jiido waddo kale, si aad "u taabato" qalbiyada kelinimada u halaagsamay ee dadka qaar ee aad ka heli doontid jidkaaga.
Ciyaar uu naqshadeeyay Vogt oo aad uga geddisan rimidda Webiga Xogta weyn; mid aad ku wado markab adduunyo la mid ah filimka hollywood ee Tron. Safarka Skyward raadso yoolal kale si aan u helno nafteena kahor ciyaar aad uxun oo aan ku neefsano xasilooni badan.
Waxaa jira wax nasasho ah oo ku saabsan Safarkan Skyward ee imanaya Android si bilaash ah si aad ugu faraxdid dhammaan intaas oo shimbiro ah oo shaashadda ka muuqan kara daqiiqado badan. Waana sida aad "kuleylka" u siiso dadkaas lumay, shimbirahaas ayaa isku beddeli doona si ay u noqdaan kuwo sixir ah oo waxay ku siin karaan "jacayl" dheeraad ah markay marayaan jasiiradahaas la deggan yahay.
Ciyaar zen si aad u nasato
Kadib Fortnite ama PUBG Mobile, Ciyaaraha sida Safarka Skyward aad ayey u qiimo badan yihiin in la qaaton daqiiqad aamusnaan ah oo aan si fudud u neefsanno, iyadoo aan aragno sida shimbiraha ay u qaadaan waddada dabayshaas oo ay farahayaga ku jiideen
Waxaan yeelan doonnaa heerar kala duwan oo kuwa waa weyn ay ka muuqan doonaan sidaas darteedna waxaan uga baahan doonaa kalgacal badan shimbiraha. Waa inaad sawirataa y mar labaad oo ku saabsan in "Tababaraha final" dariiqa ay shimbirahaagu u leeyihiin waxtarka la doonayo iyo dhoolla caddaynta wejigooda ka muuqata.
Safarka Skyward waa ciyaar inbadan oo aad ciyaareyso, inbadan ay awood u leedahay inay kugu dhejiso. Maadaama daqiiqadaha ugu horeeya aad awoodidWaxay umuuqataa waxoogaa ciyaar caajis ah. Waxay noqon doontaa marka aan bilowno inaan aragno madaxdii ugu dambeysay iyo shimbiro tiro badan oo shaashadda ka muuqda, markaan ogaanno inaan wajaheyno ciyaar wanaagsan; uguyaraan ka duwan inta kale ee had iyo jeer soo buux dhaafiya Google Play Store.
Safarka Skyward iyo Jeff van Dyck
Soojiidashada kale ee Safarka Skyward waa muusikada uu bixiyo Jeff van Dyck. Xaqiiqdii ma taqaanid isaga marka hore, laakiin haddii aan dhahno wuxuu iskaashi la yeeshay ciyaaraha heerka Rome Total War, Shogun Wadarta Dagaal, Baahida loo qabo Xawaaraha 2 taxane, Fifa Soccer iyo in ka badan, hubaal waad fahantay tayada codka codka ee Skyward Journey leedahay.
Taasi waxay tiri, farsamo ahaan waxaan wajaheynaa a ciyaar si fiican loo farsameeyay oo muujineysa makaanikada ciyaarta nasashada iyo qaab muuqaal fudud oo fudud, laakiin mid awood u leh inuu soo gudbiyo fikradda asalka ah ee ciyaarta. Si loo muujiyo waa muusigiis awood u leh inuu ku heeso daqiiqado aad u macquul ah biyaanadaas iyo zen taas oo khamriinaysa daqiiqad kasta oo ciyaar ah.
Safarka Skyward waa ciyaar nasasho leh oo aad ku maamuli karto adhi shimbiraha awood u yeelan doona inay u gudbiyaan dareenka ugu fiican dadka cidla ah. Ciyaar ka mid ah kuwa kala duwan oo mararka qaarkood si fiican u qaadata neefsashada, ku nool xilligan oo ku raaxeysta taxane kale oo xubno kala duwan ah si loo tirtiro tirada ugu badan ee cadawga ama ogow sida loola dagaallamo duel dad badan oo samurais ah.
Isaga oo duudduuban
Dhawaaq aad u wanaagsan
Waxay umuuqataa wax caajis ah daqiiqadaha ugu horeeya ciyaarta
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Kooxaha shimbiraha ee ciyaar aad u adag: Safarka Skyward ee OST ee Jeff Van Dyck
30 milyan oo xisaabaadka Facebook ah oo ay saameysay jabsashada
Sida loo calaamadeeyo wadahadal ku saabsan WhatsApp sida loo akhriyo